Ama-Switchgears Anamandla Aphakathi Kagesi kanye Namandla Aphezulu, Abakhiqizi Bama-Switchgears Aphezulu Amandla Kagesi e-China, Abahlinzeki, Ifektri - HNAC Technology Co., Ltd
Amandla Okushintsha Amandla Aphakathi Kagesi kanye Nama-High Voltage Switchgears
Ikhaya>Umhlinzeki Wemikhiqizo>Qedela Amasethi Emishini Kagesi Nekagesi>Amandla Okushintsha Amandla Aphakathi Kagesi kanye Nama-High Voltage Switchgears
Amasethi aphelele emishini enamandla kagesi aphezulu asetshenziselwa kakhulu ukulawula nokuvikela izinhlelo zikagesi (okuhlanganisa izimboni zamandla kagesi, iziteshi ezincane, izintambo zokudlulisa nokusabalalisa, amabhizinisi ezimboni kanye nezimayini nabanye abasebenzisi). Ingxenye yezinto zamandla kagesi noma izintambo zingafakwa noma zingasebenzi ngokwezidingo zokusebenza kwegridi, noma zingasetshenziswa lapho okokusebenza kwamandla noma ulayini wehluleka, ingxenye engalungile isuswa ngokushesha kugridi yamandla, ukuze qinisekisa ukusebenza okuvamile kwengxenye engenamaphutha yegridi yamandla kanye nokuphepha kwemishini nokusebenza kanye nabasebenzi abalungisayo.
Amasethi aphelele we-low-voltage aphelele asetshenziswa kakhulu ekusabalaliseni amandla, ukushayela kukagesi kanye nemishini yokulawula okuzenzakalelayo yezinhlelo zamandla aphansi ezitshalweni zamandla.
Imikhiqizo yochungechunge isebenzisa inhlanganisela yesigaba sesakhiwo njengohlaka oluyisisekelo. Zonke izingxenye zesakhiwo zilungiswe ngezikulufo. Ngemva kokwenza uhlaka oluyisisekelo, iminyango, i-baffle, i-clapboard, idrowa, ubakaki okhwezwayo, ibha yebhasi kanye nezingxenye zikagesi zilungiswa njengoba kudingekile ukwenza i-switchgear ephelele;
Uhlaka lusebenzisa isigaba esigoqiwe. Ibekwe ngebhodi lezinhlangothi ezintathu, futhi ixhunywe ngebhawodi, ngaphandle kwesakhiwo se-welding, ukuze kugwenywe ukuguqulwa kwe-welding nokucindezeleka futhi kuthuthukise ukunemba kokufakwa;
Zonke izakhiwo zangaphakathi zinezinsimbi, isakhiwo sangaphandle sifafazwa nge-static epoxy powder ngemva kokwelashwa nokuphathwa kwe-phosphating;
Ukusetshenziswa kwangaphakathi, ukuphakama kokusebenzisa indawo ≤ 2000m (okungaxoxiswana ngenhla kwalokhu);
Umswakama ohlobene akufanele udlule u-50% ku-+40℃, kanti emazingeni okushisa aphansi, umswakama okhudlwana uyamukeleka, isb 90% ku +20℃. Uma kucatshangelwa ukushintsha kwezinga lokushisa ngesinye isikhathi kungase kubangele ukuminyanisa, isilinganiso sosuku kufanele sibe ngaphansi kuka-95% futhi isilinganiso sanyanga zonke sibe ngaphansi kuka-90%.